Aafno Khabar | Trusted Online News Protal of Nepal विचार/ब्लग Archives | Aafno Khabar
[caption id="attachment_85090" align="alignleft" width="250"] चक्रपाणि शर्मा गौतम[/caption] हिन्दु पञ्चाङ्ग अनुसार हरेक वर्षको फाल्गुणमास शुक्लपक्षको १५औं तीथिको दिनलाई फागुपूर्णिमा भनिन्छ। यस पूर्णिमाले बशन्तऋतुको आगमन सँगै हिउँदको जाडो समय अबदेखि सकिँदै गएको सङ्केत गर्दछ। यो समयमा प्रकृतीले पनि आफ्नो रुप बदलिसकेको हुन्छ।...
काठमाडौं । आउँदो बिहीवारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसीमाथिको छलफल अगाडि बढाउने संसद् सचिवालयले तयारी गरेको छ । एमसीसी सम्झौतामाथि सांसदले संशोधन राख्न नपाउने भएकाले छलफल मात्रै चलाउने तयारी भएको हो । गठबन्धन दलमा कुरा मिलेमा प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीवार...
कमल थापाको पद लोलुपताले ब्यूतिएको राप्रपा नेपाल
हिन्दु धर्म र राजतन्त्र स्थापनाको मुख्य एजेण्डा बनाएर २०७६ फागुन २८ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा एकिकरण भएको पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपा फेरी विभाजन भएको छ । हिन्दु धर्मको ग्रन्थ गिता छोएर खाएको कसम २ वर्ष पनि बित्न नपाउँदै कमल थापाले...
के मान खोज्नु उचित होईन र ?
उत्पत्ति कालदेखि अहिलेसम्म मानव जातिले विकासका विभिन्न चरणहरु पारगर्दै बर्तमान अवस्थामा आएको छ। उसमा विकासको क्रम जसरी परिवर्तित हुँदै आएको थियो । उसका चाहना र आबस्यकताहरु पनि त्यस्तै किसिमले बढ्दै र परिबर्तित हुँदै आएका थिए। जब–जब उसलाई नयाँ–नयाँ बस्तुहरुको खाँचो...
महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देउवा, पौडेल र सिटौला समूहमा विभाजन, नयाँ प्यानल बन्ने संकेत
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतर पक्षधर बीचमा स्पष्ट रूपमा विभाजन देखापरेको छ । महाधिवेशन सुरू हुन केही घण्टा बाँकी रहँदा पनि नेपाली कांग्रेसका दुवै पक्षमा सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र त्यसैमा अडान कायम रहँदा दुवै पक्षमा स्पष्ट...
एक दिनमा कति मासु खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ?
नेपालीको घर घरमा दशैं भित्रिसकेको छ । दशैंको पहिलो दिन घरघरमा घटस्थापना गरेपछि दशैं सुरू भएको हो । दशैंमा सबैभन्दा धेरै मासु कै परिकार पाक्छन् । यहीकारण दशैंमा मासुको खपत अत्याधिक हुने गर्छ । सामान्य समयभन्दा यो समयमा झण्डै १०...
मेलम्चीमा भेल उर्लिएपछिको त्यो रात…
असार महिनाको पहिलो दिन । दिउँसोदेखि नै पानी परिरहेको थियो । बेलाबेलामा मौसम खुल्थ्यो पनि । साँझको पाँच बज्न लागेको थियो । केही साथीहरु ट्राउट माछा खान जाने योजनामा रहेछन् । त्यतिबेला म चनौटेस्थित घरमा बसिरहेको थिएँ । साथीहरु लिन...
अविश्वास प्रस्ताव छलेर ताला-चाबी लिन खोज्दा यसरी फसे पोखरेल !
काठमाडौं । राजीनामा दिएको १२ घण्टा नबित्दै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुन नियुक्त भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा असन्तुष्टी देखिएको छ । पोखरेल पुन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेकपा एमालेका एक जना सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने उनले आफ्नो पक्षमा गणना गरेका दुई...
यसपालिकाे खेलमा यसरी विजयी भए बामदेव गौतम !
काठमाडौं । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुँदा नेकपाका नेता बामदेव गौतम नेकपा एकता अभियानको पक्षमा देखिए । कुनै पनि समुहमा नलाग्ने निर्णय गरेका गौतम पार्टी एक् बनाउन आफ्नो पक्षबाट पहल गरिरहने बताउँदै आएका थिए । विभिन्न समयमा नेकपालाई...
नेता ज्यू, यो वितृष्णा कसले गर्दा ?
विश्वभर महामारी को रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । सुरुवाती दिनहरु मा अन्य देशहरु भन्दा कम संक्रमण देखिँदा यो अनुसन्धान कै विषय बन्न सक्छ भन्ने विश्लेषण पनि नसुनिएको होइन तर यो ग्राफले वर्तमान समयमा...